बलिउड अभिनेत्री कट्रिना आफ्नो अनुहारको चमक गुम्न नदिन अपनाउछिन् यी टिप्स - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ सौन्दर्य स्वास्थ्य ∕ बलिउड अभिनेत्री कट्रिना आफ्नो अनुहारको चमक गुम्न नदिन अपनाउछिन् यी टिप्स
बलिउड अभिनेत्री कट्रिना आफ्नो अनुहारको चमक गुम्न नदिन अपनाउछिन् यी टिप्स
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७९ वैशाख १५ गते, १४:१७ मा प्रकाशित
बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफको कुरा गर्दा उनको सुन्दरताको चर्चा पक्कै हुन्छ । सबैले उनको चम्किलो अनुहार हेर्न थाल्छन् । अभिनेत्री कट्रिनाले यस्तो जवान र चम्किलो छालाको लागि धेरै फेसियल ट्रिटमेन्ट गरेको हुनुपर्छ भन्ने मानिसहरु सोच्छन् । तर, त्यस्तो भने पक्कै हैन ।
छालाभित्रबाट स्वस्थ नभएसम्म महँगो उत्पादनको प्रभाव देख्न नसकिने अभिनेत्री अक्सर बताउछिन् । यसको लागि छालाको हेरचाह दिनचर्या पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले छालालाई स्वस्थ र भित्रबाट चम्किलो बनाउँछ। तर, राम्रो आहारविना पनि यसको प्रभाव कम हुन सक्छ। ३८ वर्षीया अभिनेत्रीका लागि डाइट निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । के खाने र के नखाने भन्ने कुरामा उनी सधैं विशेष ध्यान दिन्छिन् ।
कट्रिनाका अनुसार फिट रहनका लागि डाइट जति नै सौन्दर्यतामा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईले के खानु हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष भिन्नता छालामा देखिन्छ। चम्किलो छालाका लागि अभिनेत्रीले आफ्नो डाइटबाट धेरै कुरा हटाएकी छिन् । यो उनको सुन्दरताको लागि दुश्मन भन्दा कम छैन।
कट्रिना कैफले मुभी टकिजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनिन् कि पानीको महत्व सबैलाई थाहा छ तर यो कुरालाई धेरै कम मानिसले पालना गर्छन् । यदि तपाई चम्किलो र ताजा छाला चाहनुहुन्छ भने सकेसम्म पानी पिउनुपर्छ । त्यस्तै, कट्रिनाले दैनिक कम्तीमा ४ लिटर पानी पिउने गर्छिन् ।
उनको डाइटमा भडकाऊ खानेकुरा समावेश छैन। जसले उनीहरुको छालामा धेरै फरक देखेको छ । वास्तवमा, यसले अनुहारमा सुन्निने काम गर्छ। जसका कारण अनुहार निकै फुस्रो र नीरस देखिन थाल्छ । साथै, तपाईलाई यो थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ कि सामान्य मानिसहरूले यी भड्काउने खाद्य पदार्थहरू दैनिक उपभोग गर्छन्।
एकातिर जहाँ तपाईले आफ्नो दिन चिया वा अन्य डेयरी उत्पादनबाट सुरु गर्नुहुन्छ, त्यहाँ कट्रिनाले यसलाई आफ्नो आहारबाट पूर्णतया हटाइन् । अभिनेत्रीका अनुसार यो एक सूजनकारी खाना हो जसले अनुहार सुन्निन सक्छ। त्यसैले उनी यो कुराको विशेष ख्याल राख्छिन् ।
भारतमा गहुँको खपत धेरै छ। यसको रोटी, पराठा, चुर्मा आदि धेरै चीजहरू छन्, जुन मानिसहरूले दैनिक उपभोग गर्छन्। यी पदार्थहरूमा एक प्रकारको प्रोटिन पाइन्छ, जसलाई ग्लुटेन भनिन्छ। तर, कट्रिनाले यो प्रोटिन खानबाट जोगाउँछिन् । किनभने यसले उनीहरूको छालामा नकारात्मक असर गर्छ।
कट्रिना कैफका अनुसार यदि तपाइँ आफ्नो छालामा ठूलो फरक देख्न चाहनुहुन्छ भने रिफाइन्ड चिनीको सेवन नगर्नुहोस्। कुनै पनि प्रकारको परिष्कृत चिनीले तपाईंको छालालाई चम्किलो हुनबाट रोक्छ। यही कारणले गर्दा नायिकाले पनि यसको सेवन गर्दैनन् । यसका साथै यसको अत्याधिक सेवनले अनुहारमा बुढ्यौलीका लक्षणहरु देखिन थालेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
क्याटेगोरी : सौन्दर्य स्वास्थ्य
कलर गरेको कपाललाई घामबाट जोगाउने तरिका
चम्किलो अनुहार बनाउने टिप्स
कपालमा पर्ने चायाबाट छुटकारा कसरी पाउने ?
दिनमा कति पटक अनुहार धुने ? विज्ञको यस्तो सुझाव
मात्र पानीले अनुहारको चमक बढ्न थाल्छ, यी ४ चिज मिलाउनुहोस्
भिडियो स्टोरीः कपालमा जथाभावी केराटिन गर्दा आउन सक्छन् यस्ता समस्या
१ अर्बपति बिल गेट्सलाई कोभिड संक्रमण
२ विश्व हेमोफिलिया महासंघको बोर्ड सदस्यमा डा विशेष पौडेल नियुक्त